အဲယားဘတ်စ် A300 Multi-livery, Mega Pack ကို DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အဲယားဘတ်စ် A300 Multi-livery, Mega Pack ကို FSX & P3D
အရွယ် 102 ကို MB
downloads ရယူရန္ 89 995
Author: သောမတ်စ်ရုသ & သူ့အဖွဲ့ / ပူးပေါင်း, သူ Mike Maarse အားဖြင့်အသံ, လူးဝစ် Quintero အားဖြင့် repack
ဤသည် pack ကိုအောက်က table ထဲမှာစာရင်းအဲယားဘတ်စ် A14-XXX က (-300R, 600F, ST, B600, B1, B2) နှင့်4liveries ၏ 31 မော်ဒယ်များပါဝင်သည်။ General Electric CF2-6C80, CF2-6C50 နဲ့ Pratt & Whitney JT2D-9R7G4 (မရရှိနိုင်ဘဲ JT2D-9A အစားထိုးထားတဲ့): တစ်ခုချင်းစီမော်ဒယ်ထုံးစံနှင့်အတူ၎င်း၏ 59d panel ကိုနှင့်ကို virtual ယာဉ်အဖြစ်အသံရှိပါတယ်။ တစ်ခုလုံးကိုလေယာဉ်ပျံတလျှောက်လုံး 27 ထုံးစံလုပ်အမြင်များပါဝင်သည်။ သင်ကရှိခြင်း၏စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်, ငါ့ကိုယုံကြည်ကြသည်။ အရေးကြီး: တွင်ဤလေယာဉ်များ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖို့လက်စွဲကိုဖတ်ရန်သေချာစေပါ FSX or P3D.
အဲယားဘတ်စ် A300-600F အဲယားဘတ်စ် A300-600R အဲယားဘတ်စ် A300-600ST အဲယားဘတ်စ် A300-B1 အဲယားဘတ်စ် A300-B2 အဲယားဘတ်စ် A300-B4
DHL ဥရောပ +
+ UPS / ယူနိုက်တက်ကှကျန်ဆောင်မှုများ + အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း
+ ကာတာလေကြောင်းလိုင်း - Old အရောင်များ
+ Aegean လေကြောင်းလိုင်း
+ အိုလံပစ် Air လေကြောင်းလိုင်း
+ တရုတ် Eastern လေကြောင်းလိုင်း
+ China Southern Airlines က
+ မာဟန် Air လေကြောင်းလိုင်း (2 liveries) + အိမ်အရောင်များ + ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းအရောင်များ
+ Trans ဥရောပလေကြောင်းလိုင်း - လက်ဖက်ရည် Lufthansa +
+ မာဟန် Air လေကြောင်းလိုင်း (2 liveries) + Aerounion
+ Air ကိုဂျမေကာ
+ မာဟန် Air လေကြောင်းလိုင်း (2 liveries)
+ စကင်ဒီနေးလေကြောင်းလိုင်း - Old အရောင်များ
အဲယားဘတ်စ်သုညက G နှင့်အတူပါဝင်စေ !!!
တွမ်အဲယားဘတ်စ် A330 MRTT FSX & P3D
အဲယားဘတ်စ် A380 ပြင်သစ်လေကြောင်း FSX
အဲယားဘတ်စ် A340, Mega အထုပ် Vol 1 FSX & P3D
ဗြိတိန်လေကြောင်းလိုင်း Landor အတွက်အဲယားဘတ်စ် A320-232 FSX & P3D
FSPX အဲယားဘတ်စ် A350-900XWB FSX & P3D